नाटक राज-नीति र एनआरएनए प्रतिनिधि -अच्युत सिग्देल | Nepalese Diaspora
गत अगस्त १७ तारिख न्यु योर्कमा गज्जवको राज- नीति नामक नाटक मन्चन गरिएको थियो। ससक्त कलाकार नादिया लिवाङ र सँगीता उप्रेती रिजाल अभिनीत त्यो नाटकमा प्रवाशको समसामयीक बिषय प्रति बेजोड़ व्यङ्य गरिएको थियो। दर्शक पेट मिचिमिचि हॉसेका थिए ।
त्यसै नाटककों एक प्रसँगमा राज र नीतिको चरित्रमा एन आर एन आई सी सी चुनाव र प्रतिनिधि छनौट प्रकृयाबारे पेचिलो चरित्र चित्रण गरिएको थियो। आफूलाई भोट दिने जति छानेर लजिङ, फुडिङ र प्लेन टिकट दिएर नेपाल लैजाने तयारी हुदैछ भने आसय थियो त्यस नाटक भित्र ।
सँयोग मान्नु पर्छ अहिले दुई महिना पछि आएर त्यो नाटकले बास्तविक रूप लिदैछ। दुई चरणमा पालै पालो झण्डै सवासय जनाको लिष्ट निकाले पछि तेश्रो लिष्ट रोकिएको छ । बिश्वासिलो सुत्रका अनुसार प्रस्तावित एक दुई बिषिष्ट व्यक्तिको नामलाई लिएर किचलो चर्किएको हो । नाटकमा भने झै एउटा जित्ने अध्यक्ष उम्मेद्वारले टिकट र होटल सँयोजन गरि दिने टन्न कवाव, सवाव, ब्लु लेवल र डबल ब्लाक फुटाएर दशै मनाउने र अर्को छ महिना एफ ओ सीमा मस्ति गर्ने योजनामा गडवडी हुने सम्भावना थाह पाएर भॉडभैलो रचिएको छ । स्थानीय राजनीतिमा शक्ति सँधर्ष र दाउपेच नै वर्तमान प्रतिनिधि छनौटको उल्झन हो भनेर बजार चर्चा चलेको छ । वर्तमान एन आर एन ए अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा आफूले भनेकोलाई भोट नदिनेलाई प्रतिनीघि बनाईदैन भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अझै रेकर्डेटेड र सुरक्षित नै छ।
एक कार्यकारी सँग फोनमा सम्पर्क भए अनुसार । बर्तमान बिधानले प्रतिनिधी छान्न प्रतिकूल अबस्था सृजना गरेको हो । बर्तमान वा बिगतको कार्यकारी पदाधिकारीहरू मात्र छनौट गर्ने हो भने आगामी चार कार्यकाल पछि महाधिवेशनको औचित्य नै सकिने छ ।
दश प्रतिशत प्रोक्सी मताधिकारको हवला दिएर मनोमानी बिधान सम्सोधन गर्ने र आफ्नो अनुकुल सँस्था सँचालन गर्दै जाने हो भने । मुद्दा मामिलाको फाईलले अदालतको दराज़ भरिने सम्भावना छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : लालबाबुलाई किन गाली मात्रै गर्ने
बिधानत: राजनीति, धर्म, जात- जातीका बिषयलाई प्रतिबन्ध लगाईएको यो सामाजिक सँस्थामा पछिल्लो ढोकावाट राजनीतिक बर्गिय सँगठन, जनसम्पर्क समितीको एउटा गुट हालिमुहाली गर्दैछ । परोक्ष गुटलाई निरोधको राजनीति गर्न रूचाउने यो समुहको सहकार्यमा प्रवाशी नेपाली एकता मन्च पनि बामे सरेर घुस्न खोज्दै छ । जसको उधारण बिगत सल्लाहकारमा राखिएका र प्रतिनिधि छनौट नामाबलीको आधारले प्रमाणीत गर्दछ।
प्रवाशमा रहेका नेपालीहरूका साझा समस्या र सामाजिक आवाजलाई नेपाल वा स्थानीय सरकार सँग बुलन्द रूपमा उठाउन र सहकार्य गर्न, हातेमालो र भाईचाराको पवित्र उध्यस्यले खोलिएको यो सँगठन । आलाकॉचा बिध्यार्थी राजनीतिकों स्ववियू सँगठनको रूपमा क्रमश रूपान्तरित हुनु दुखद छ ।
यहि प्रतिनिधी छनौट प्रकृयालाई ग्राहयता दिने हो र आफू ख़ुशी र आफ्ना आफ्ना विश्वासपात्र र हनुमानमात्र छानिने हो भने फ़्लोरको जन आवाज कहॉ राख्ने ?
नेपाली राजनीतिमा तटस्थ रहने र एन आर एनको हक हीतको लागि चिन्तन मनर गर्ने र सुभेक्षा दिन चाहने गुणस्तर मनहरूलाई कहिले र कसरि समेटने ?
स्वँम्भू नाथको विसाल ऑखाले हेर्दा अमेरिकामा बस्ने करिव तीनलाख नेपाली सबै एनआरएनए सदस्य हुन। नेपाली भाषी भूटानीहरू जोडिनेहो भने करिव चारलाख नेपाली छौ यहॉ । सन्सारको जुन सुकै कुनामा वोई यता आइज, उता जा, बस, खा भनेपनि वा आईस्योस, राज गरिस्यो भने पनि सबैलाई हेर्ने नजर र परिचय भनेको एन आर एन नै हो ।
तिनलाख एनआरएनएबाट करिब आफ्नै खर्चमा सदस्य बनेका करिब तिन चार हजार एनआरएन सदस्य मात्र एन आर एनका बास्तविक प्रतिनिधी पात्रहुन । उनको आवाज र प्रतिनिधित्व केन्द्रिय सम्मेलन सम्म पुऱ्याउने आधार चाहि के हो ?
आफैले भोट हालेर जितेका कार्यकारी मात्र नेपाल जाने, परिवार भेट्ने, मोज मस्ती गर्ने, खादा माला पहिरिएर फोटो सेसन गराएर फर्कने क्रम नरोकिने हो भने यो संस्थाको भविस्य छैन। यदि बास्तविक एन आर एनको आवाज सुनिदैन भने यो जयजयकार र हो हो भेडा बाख्रा समुहलाई गरिमामय एन आर एनको बिल्ला भिर्न नदिन बेलामा सोच्नु पर्ने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : भूपू गोरखा सैनिकहरूले सल्काएको शिक्षाको दियो -प्रा.डा. नोवलकिशोर राई
श्राद्द (कविता) -अच्युत सिग्देल
वाटर मेलन ! (कविता) -अच्युत सिग्देल
नेपाली कांग्रेस, अमेरीकाका महाधिबेशन प्रतिनिधि…
कांग्रेसले दोस्रो चरणअघि सबै संरचना बनाउने, ३३ देशका…
म त NRNA USA को सद्स्य बने, तपाइ नि ? -अर्जुन सिग्देल
एेना -अच्यूत सिग्देल
अच्युत सिग्देलको दशैं शुभकामना
कसरी पार लगाऊँ खै एक्लै अब -लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गाना…
मेरो अभिष्ठ भनेको अमेरिकाज क्षेत्रको एकताबद्ध एनआरएन समुदाय नै हो -राजन त्रिपाठी 33 views